EyeDwarha 6, 2018 admin
qalisa entsha VOIP vulindlela ibhatala abasebenzisi inzala izigidi crypto
Celsius, a qalisa cryptocurrency yokubolekisa, akayihlawuli imali amawaka abasebenzisi wenzala bawabeka Bitcoin kunye kaEtere kunye app yayo isipaji. Celsius othi ngabayihlanganisileyo ngaphezu 10,000 abasebenzisi ukususela ukumiselwa elithambileyo app mobile ngo June 29, nge isilinganiso idiphozithi ye 0.5 bitcoin okanye 5.5 kaEtere abarhola phezulu ku 6.7% qho eyonyaka. Umdla livela ingeniso Celsius yenza ukubolekisa eyake kunye crypto, enkulu yokugqibela ukuba kuyibiyela imali ukuba ufuna short, okanye babheje nxamnye, zemali.
“Xa sisenza ingeniso umdla kuhlawula kuzulu ukuba emva abantu wasinika BTC,” uthe CEO Celsius Alex Mashinsky, ongavunyelwayo owaziwa kakhulu unguvulindlela Voice phezu iProtkholi ye-Intanethi (VOIP). Celsius ifuna wammela zonke iimali-mboleko zayo kwaye isebenza njenge ibhanki ngaphezu iqonga P2P. Sokuqalisa kwakhona inama iindwalutho eluntwini: Telecom umakad Mashinsky & ukuguqula Scott Stornetta, ngubani ezicatshulweyo izihlandlo ezininzi kwi Bitcoin iphepha elimhlophe yokuqala, njengoko umcebisi. “Ndenza ngaphandle, ngaphandle kuqala, ngokuba Celsius ngoba ndicinga impumelelo yabo iza kuba nempumelelo ngenxa lonke uluntu blockchain” Stornetta uthe. Ethetha indlela Celsius inika iinkonzo efana zebhanki zemveli, waphetha: “Kufuneka uthathe yimibono yakho sibini kunye neenkozo zepistasi, Imivalo ukwakha esifaka, ekupheleni-umsebenzisi wexabiso.”
Umzuzwana ucela izimvo ezongezelelweyo kwi wamlahla Bitcoin ETFs
I-US Securities and Exchange Commission sicela izimvo ku 9 fund eyahlukileyo exchange-wasebenza Bitcoin (ETF) izindululo umthetho utshintsho okwangoku phantsi ngokutsha emva ekuqaleni kokuba ilahlwe. I umzuzwana ukuba ngaphambili ulicekisile izindululo iphuhlisa imiba bha Bitcoin ikamva kwiimarike kunye nengozi yokuba ndawo eyona Bitcoin imarike usemngciphekweni yokuntlokothiswa.
Xa imvuthuluka ezintsha ishicilelwe ngoLwesine, i Ima wacela izimvo zoluntu kuzo zonke iziphakamiso alithoba, kubhekiselwa Oktobha 26 njengoko umhla obekiweyo naziphi na izimvo ezintsha ukuba uluntu jikelele linqwenela ukwenza. “Le nto ke wayalela ukuba wokungalivumi odolo utshintsho ulawulo olucetywayo kuya kuhlala kusebenza de ngokutsha i yeKomishoni… yi October 26, 2018, naliphi na iqela okanye umntu usenokufaka ingxelo exhasa, okanye inkcaso ku kwizindululo ETF ulawulo” wabhala umncedisi unobhala Eduardo Aleman. I Ima kwakhona ngokwahlukeneyo liqwalasela ETF Bitcoin ecetywayo yi kuqaliso crypto SolidX kunye nolawulo imali ngokuqinileyo VanEck.
Ingxelo Daily Market Kraken for 05.10.2018
$47.2M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
7 Best ukuqeqeshwa Blockchain Development, Nezifundo kunye izitifiketi
Kumazwe amaninzi aphuhlileyo, a...